Fanararaotana an-dalamabe :: Arahin’ny polisy maso ireo mpamitaka • AoRaha
Malaza sy miparitaka indray ny endrika asa ratsy famitahana arahina fakàna vola ankolaka amin’ny olona eny an-dalambe. Mody mifandona amin’ireo sendra azy ny jiolahy sady mandatsaka zavatra simba, toy ny solomaso efa vaky eny aminy ary asainy manonitra ny sandany ireo lasibatra.
Manamafy ny fanarahamaso amin’ny fanamarinana ny momba io tranga io ny mpitandro ny filaminana, toy ny polisy miasa etsy Ampefiloha. Ametrahana polisy manao fanamiana sivily miambina eny amin’ny arabe.
Tsy mbola nisy ny tratra teny amin’iny faritra iny hatramin’ny omaly. Tahaka izany koa ny tsy naharaisana ny fitarainana mikasika an’ity fanararaotana ity. Andian’olona maromaro mihitsy no manao an’io famitahana arahina fitakiana vola io, araka ny fitantaran’ireo efa nahita sy voan’izany. Misy olona iray mody mifandona tampoka amina mpandeha an-tongotra iray eny andalambe ka mandatsaka ny solomaso eny aminy. Lazainy fa noho ny dona nampilatsaka azy no niteraka ny fahasimbany. Terena hanonitra ny vidin’ny solomaso iry voafitaka. Tonga eo ny andian’olona maro manendrikendrika azy. Voalaza hatrany fa anisan’ny toerana ahitana ny tranga toy izany ny eny Ampefiloha, Ambodivona, Antsahavola ary Ambohijatovo.